ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခိုတောင်မုန့်တီတွေလုပ်ပြီး ပြန်ရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အန်တီ ဝါဝါအောင် – Suehninsi
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခိုတောင်မုန့်တီတွေလုပ်ပြီး ပြန်ရောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အန်တီ ဝါဝါအောင်
Sue | November 9, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးအန်တီဝါဝါအောင်ကတော့ ယခင်ဗီဒီယိုခေတ်တည်းက ယနေ့တိုင်အောင် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီဝါဝါအောင်ဟာဆိုရင် အမေခန်းတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တာကို အတွေ့ရများပြီး နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာလည်း ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ အန်တီဝါဝါအောင်က ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ရပ်နားခဲ့ရတဲ့ ခိုတောင်မုန့်တီရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးကို ပြန်လည်စတင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အန်တီဝါတို့အနေနဲ့ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် ဦးအောင်ခိုင်တို့အနေနဲ့လည်း မုန့်တီပို့ဆောင်ရေး အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ခဏတာရပ်နားထားရပြီး အခုချိန်မှာတော့ အများရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် ခိုတောင်မုန့်တီကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် အန်တီဝါက မုန့်တီပြန်လည်ရောင်းချနေတာဟာဆိုရင် တစ်ရက်ခြားနှစ်ရက်ရှိပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မုန့်တီအတွက်လိုအပ်တဲ့ ပဲမုန့်၊ ငရုပ်သီးမှုန့်၊ အကြွပ်ကြော် အစရှိသည်များကို အန်တီ့ညီမဖြစ်သူနဲ့ အိမ်ရှိကောင်မလေးနှစ်ယောက်က ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပြီး အခြားသော ငါးဖယ်ကိုင်တာတို့၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ ဆီနီဆီဝါဆီသတ်တာလေးတွေကိုတော့ အန်တီဝါကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ကိုယ်ကိုတိုင်လုပ်ပေးမှ ကိုယ်လည်းစိတ်တိုင်းကျသလို ဘေးက စားတဲ့သူတွေလည်း စိတ်တိုင်းကျမယ်လို့ ထင်တယ်လေ… အန်တီဝါက ချက်တာပြုတ်တာကို ဝါသနာလည်းပါတယ်… ခိုတောင်မုန့်တီကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့အတွက် လုပ်ဖြစ်တယ်…. အဲ့တော့လည်း ပရိသတ်တွေကပါ ကြိုက်သွားကြတယ်ပေါ့လေ”
အန်တီဝါတို့က ဟင်းချက်စားကြတယ်ဆိုတာ ငယ်စဉ်ဘဝက မိခင်ဖြစ်သူချက်ကြွေးခဲ့တဲ့ လက်ရာလေးတွေကို တစ်ဖန်ချက်စားကြတာဖြစ်ပြီး မန္တလေးသူတွေဖြစ်တဲ့အန်တီဝါတို့အဖို့ ခိုတောင်မုန့်တီဆိုတာကို အပြင်တွေထွက်လည်ဝယ်စားကြရင်းနဲ့ စားဖူးရင်း ကြိုက်သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။ အန်တီဝါရဲ့ပရိသတ်တွေက လက်ခံပေးနေတဲ့အချိန်တစ်ခုထိ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်လို့ ခိုတောင်မုန့်တီလုပ်ငန်းလေးကို ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့ တင့်တင့်တယ်တယ်ရောင်းနိုင်လိမ့်ဦးမယ်မထင်ဘူးလို့ အန်တီဝါက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့ရောင်းချနိုင်ဖို့လည်း လုံလောက်နဲ့ရင်းနှီးငွေမရှိသေးဘူးလို့ အန်တီဝါက ရယ်ရယ်မောမာနဲ့ ရင်ဖွင့်ပြောပြပါတယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးအောင်ခိုင်အနေနဲ့လည်း မုန့်ဖတ်ပမာဏချိန်ဆထည့်ပေးပြီး ကျန်တဲ့အဆာပလာတွေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မုန့်ပွဲပြင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ဝင်ရောက်ကူညီပေးပြီး စားသုံးသူတွေဆီကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။အန်တီဝါတို့အနေနဲ့ ပွဲနေပွဲထိုင်များအတွက် အော်ဒါများကိုလည်း လက်ခံပေးနေပြီး ပွဲ၃၀၀ လောက်ထိတော့ ရှူတင်ရှိသည့်နေ့ပင်ဖြစ်စေ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ပရိသတ်တို့ရေ အကယ်ဒမီဝါဝါအောင်ကတော့ အခုလိုကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ရိုက်ကူးရေးတွေနားထားရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဝင်ငွေရအောင် လူကြိုက်များတဲ့သူမရဲ့ လက်ရာလေးဖြစ်တဲ့ ခိုတောင်မုန့်တီလေးတွေ ရောင်းချပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီဝါရောင်းချပေးနေတဲ့ မုန့်တီဟာဆိုရင် အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း သွားရောက်အားပေးကြပါအုံးလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျ ရုပျရှငျမငျးသမီးကွီးအနျတီဝါဝါအောငျကတော့ ယခငျဗီဒီယိုခတျေတညျးက ယနတေို့ငျအောငျ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ အနျတီဝါဝါအောငျဟာဆိုရငျ အမခေနျးတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျတာကို အတှရေ့မြားပွီး နောကျပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ ဇာတျလမျးတှဲလေးတှမှောလညျး ပါဝငျလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီအငျတာဗြူးလေးမှာတော့ အနျတီဝါဝါအောငျက ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျးကွောငျ့ ရပျနားခဲ့ရတဲ့ ခိုတောငျမုနျ့တီရောငျးတဲ့လုပျငနျးလေးကို ပွနျလညျစတငျနပွေီ ဖွဈတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အနျတီဝါတို့အနနေဲ့ ဒုတိယလှိုငျးဖွဈဖွဈခငျြးမှာ လမျးပိတျဆို့မှုတှကွေောငျ့ ဦးအောငျခိုငျတို့အနနေဲ့လညျး မုနျ့တီပို့ဆောငျရေး အဆငျမပွတေဲ့အတှကျ ခဏတာရပျနားထားရပွီး အခုခြိနျမှာတော့ အမြားရဲ့တောငျးဆိုမှုကွောငျ့ ခိုတောငျမုနျ့တီကို ကိုယျတိုငျလုပျပွီး ပွနျလညျရောငျးခဖြွဈနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အခုဆိုရငျ အနျတီဝါက မုနျ့တီပွနျလညျရောငျးခနြတောဟာဆိုရငျ တဈရကျခွားနှဈရကျရှိပွီ ဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။ မုနျ့တီအတှကျလိုအပျတဲ့ ပဲမုနျ့၊ ငရုပျသီးမှုနျ့၊ အကွှပျကွျော အစရှိသညျမြားကို အနျတီ့ညီမဖွဈသူနဲ့ အိမျရှိကောငျမလေးနှဈယောကျက ကူညီလုပျကိုငျပေးပွီး အခွားသော ငါးဖယျကိုငျတာတို့၊ ကွကျသှနျနီနဲ့ ဆီနီဆီဝါဆီသတျတာလေးတှကေိုတော့ အနျတီဝါကိုယျတိုငျ ပွုလုပျလရှေိ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ “ကိုယျကိုတိုငျလုပျပေးမှ ကိုယျလညျးစိတျတိုငျးကသြလို ဘေးက စားတဲ့သူတှလေညျး စိတျတိုငျးကမြယျလို့ ထငျတယျလေ… အနျတီဝါက ခကျြတာပွုတျတာကို ဝါသနာလညျးပါတယျ… ခိုတောငျမုနျ့တီကိုလညျး ကိုယျတိုငျကွိုကျတဲ့အတှကျ လုပျဖွဈတယျ…. အဲ့တော့လညျး ပရိသတျတှကေပါ ကွိုကျသှားကွတယျပေါ့လေ”
အနျတီဝါတို့က ဟငျးခကျြစားကွတယျဆိုတာ ငယျစဉျဘဝက မိခငျဖွဈသူခကျြကွှေးခဲ့တဲ့ လကျရာလေးတှကေို တဈဖနျခကျြစားကွတာဖွဈပွီး မန်တလေးသူတှဖွေဈတဲ့အနျတီဝါတို့အဖို့ ခိုတောငျမုနျ့တီဆိုတာကို အပွငျတှထှေကျလညျဝယျစားကွရငျးနဲ့ စားဖူးရငျး ကွိုကျသှားကွတာဖွဈတယျလို့လညျး ပွနျပွောငျးပွောပွပါတယျ။ အနျတီဝါရဲ့ပရိသတျတှကေ လကျခံပေးနတေဲ့အခြိနျတဈခုထိ အနုပညာလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျသှားမှာဖွဈလို့ ခိုတောငျမုနျ့တီလုပျငနျးလေးကို ဆိုငျနဲ့ကနားနဲ့ တငျ့တငျ့တယျတယျရောငျးနိုငျလိမျ့ဦးမယျမထငျဘူးလို့ အနျတီဝါက ပွောပါတယျ။
အဲ့ဒီလို ဆိုငျနဲ့ကနားနဲ့ရောငျးခနြိုငျဖို့လညျး လုံလောကျနဲ့ရငျးနှီးငှမေရှိသေးဘူးလို့ အနျတီဝါက ရယျရယျမောမာနဲ့ ရငျဖှငျ့ပွောပွပါတယျ။
ခငျပှနျးဖွဈသူဦးအောငျခိုငျအနနေဲ့လညျး မုနျ့ဖတျပမာဏခြိနျဆထညျ့ပေးပွီး ကနျြတဲ့အဆာပလာတှပွေငျဆငျပေးတဲ့ မုနျ့ပှဲပွငျတဲ့ကိစ်စတှမှော ဝငျရောကျကူညီပေးပွီး စားသုံးသူတှဆေီကိုလညျး ကိုယျတိုငျလိုကျပို့ပေးတယျလို့ သိရပါတယျ။အနျတီဝါတို့အနနေဲ့ ပှဲနပှေဲထိုငျမြားအတှကျ အျောဒါမြားကိုလညျး လကျခံပေးနပွေီး ပှဲ၃၀၀ လောကျထိတော့ ရှူတငျရှိသညျ့နပေ့ငျဖွဈစေ တဈနိုငျတဈပိုငျ ပွငျဆငျပေးနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ပရိသတျတို့ရေ အကယျဒမီဝါဝါအောငျကတော့ အခုလိုကိုဗဈကပျရောဂါအခွအေနကွေောငျ့ ရိုကျကူးရေးတှနေားထားရတဲ့အခြိနျမှာ တဈဖကျတဈလမျးမှဝငျငှရေအောငျ လူကွိုကျမြားတဲ့သူမရဲ့ လကျရာလေးဖွဈတဲ့ ခိုတောငျမုနျ့တီလေးတှေ ရောငျးခပြေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနျတီဝါရောငျးခပြေးနတေဲ့ မုနျ့တီဟာဆိုရငျ အနံ့အရသာနဲ့ ပွညျ့စုံလှနျးတာဖွဈတဲ့အတှကျ ပရိသတျကွီးတို့လညျး သှားရောကျအားပေးကွပါအုံးလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ဆေးရုံစောင့်နေရတယ်လို့ အဖေများနေ့အမှတ်တရလေး ပြောပြခဲ့တဲ့ ခြူးလေး
ကလေးပြိုင်ကားအရုပ်တွေကို တက်မောင်းနေကြတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ ခင်လှိုင်ကို ဆေးထိုးခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
ယနေ့မနက် မျက်လုံးခဏပြန်ပွင့်လာပြီဆိုတဲ့ ဦးမန်းဝင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ